New Customs Policy! Ratidza Rule Changes musi Import & Export! - China Longkou Fushi Apex
New Customs Policy! Ratidza Rule Changes musi Import & Export!
China Customs akaita akasunungura Order No.56 kuchinja inbound pachena mutemo riri kutora kushanda musi 1th June, 2018.
Vamwe panogadziriswa pamusoro outbound pre-zvinoratidzwa, somuenzaniso:
1.The kupedza uye yakarurama zvinhu mashoko anofanira kuzviisa pasi China Customs mukombiyuta 24 maawa risati vachizvitakudza mungarava mudziyo chaienda kune / Via / kubva Chinese zvengarava.
2.Shipper kuti mutero ID, kuonana nhamba shipper wacho, consignee zita wekambani sezvo mukuru Data ari pre-pachena vari kugadziridzwa kuti fanira minda.
3.All hazvo pasi kubhadhara nhumbi anofanira hungaparidzwa kuonekwe zvakakwana uye zvakarurama. China Customs achaita dzika Negative List Management pamusoro akataura hazvo. Chero mu-zvinodiwa Customs mutemo kucharambwa
Vazhinji kutumirwa Makambani zvamatonga anoenderana zviziviso pamwe. Uye vatengi vanofanira kupa yakarurama uye kwakakwana kutumirwa mirayiridzo pamberi mapepa chekawo-kure nguva zvakabudiswa musi kutumirwa makambani 'Websites.
Chii kuchinja kuchaita kugadziridza ichi achaunza?
Kana zvinhu kupinza mukati chaimo China kana zvaipfuura kuburikidza yakaoma China, kwakakwana uye yakarurama pachena mashoko ose nhumbi anofanira akatumira China Customs Via zvemagetsi Data maawa 24 vasati zvacho, June 1st, 2018.
Zvinorevei zvakakwana uye yakarurama pachena mashoko?
Mazita cargos zvose pasi rugwaro nhumbi anofanira zvakajeka uye zvachose akazivisa pamusoro pachena, uye mashoko zvinhu igadziridzwe yacho kunoratidzwa itsva dzinosanganisira:
1.USCC of consignor
2.Phone Kuwanda consignor
3.Enterprise Code of shipper
4.Name of consignee (kana kunyora pasi "To KUTI" iri chaiyo ezvinhu)
5.USCC of consignee (Kana consignee iri "arayire", ipapo USCC haina kuzvireva)
6.Phone Kuwanda consignee (Kana consignee iri "arayire" zvino kutaura mashoko haina kuzvireva)
7.Name of consignor (kana kunyora pasi "KUTI KUTI" iri chaiyo ezvinhu)
8.Enterprise Code of consignee
9.USCC of wazivisa bato chinodiwa kana consignee ari "arayire".
10.Phone nhamba wazivisa bato chinodiwa kana consignee ari "arayire"
Ko kutyorwa ari Ratidza Fling kurangwa?
Pena Chisungo zvakatangwa ne Customs panyaya kutyorwa iri pachena pakunamata. Zita murayiro ndiye "The Implementation chimiso Administrative yeChirango of Customs vanhu Republic of China", iro wakabudiswa uye vakava inobudirira muna 2004.
Ko nzira kutungamirira kuti Kuziviswa vatengi 'mashoko?
Nzira idzva pachena kugadziridzwa haiiti kuti Kuziviswa nemakasitoma 'bhizimisi tisanzwe ruzivo.
Nzwisisa mashoko zvinhu akawedzera pachena (kunze zita consignee) haifaniri kuratidzwa pamusoro rugwaro nhumbizve nekanzuru mutakuri. Mushure pachena rwunotumirwa tsika, tsika mudonzvo anofanira kuchengetedza zvokutengeserana zvakavanzika uye zvakavanzika inoshandawo netsika basa maererano nomutemo.
The June 1st iri vhuu, kuitira kuti chokwadi zvinhu kuenda kuburikidza netsika zvakanaka, ndapota teererai yokunyoresa zvinoratidzwa itsva, uye chengeta nhumbi kubva wavharirwa!